Umaki: umhleli wethebhu ye-facebook | Martech Zone
Umaki: umhleli wethebhu ye-facebook
I-Trumpia inikela nge-suite yokumaketha konke okukodwa okubandakanya ukuthumela imiyalezo ngomakhalekhukhwini, ukumaketha nge-imeyili imithombo yezokuxhumana, ukusakaza ngezwi nokuthumela imiyalezo ngokushesha. Ngokwengeziwe, uhlelo lunezihlungi ezihlakaniphile, ukukhomba okunamandla, ukuphathwa komkhankaso, amakhuphoni ne-API yonjiniyela oqinile. Kungabhalwa futhi kube mhlophe! Ipulatifomu yeTrumpia iyindlela yokusakaza eneziteshi eziningi esetshenziselwa ukuqoqa, ukuthumela imiyalezo, ukubandakanya nokukhuthaza ukunikela kwakho ngeselula, i-imeyili kanye nemithombo yezokuxhumana. Banikela ngezici ezimbalwa ngaphakathi kwecebo ngalinye: Qoqa